देश Archives - Sudur Khabar
Sudur Khabar January 18, 2018 January 18, 2018 देश 0
काठमाडौं, माघ ४ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार थाइल्याण्डबाट स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि पुस २६ गते थाइल्याण्डको बैङ्कक गएका ओली दिउँसो १२ बजे त्रिभूवन विमानस्थल आइपुग्ने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । उहाँ मंगलबार नै नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहे पनि दुई दिन थप गरी बिहीबार मात्र
Sudur Khabar January 18, 2018 देश 0
काठमाडौं, माघ ४ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तोकिएका निर्वाचन अधिकृत सहितका न्यायाधीशहरुसँग बिहीबार (आज) छलफल गर्दै छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन संचालन र व्यवस्थापनका विषयमा निर्वाचन अधिकृतहरुलाई जानकारी गराउन छलफल बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए। आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका, मतदानको व्यवस्थापना, मतगणना लगायका विषयमा जानकारी
काठमाडौं, माघ ४ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बिहीबार बस्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्न लागेको हो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको समीक्षा गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक बोलाएका हुन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसभित्र उम्मेदवार आकांक्षीहरूको लर्को लाग्न थालेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा
Sudur staff January 18, 2018 देश 0
काठमाडौं, माघ ४ । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का महासचिब क. सीताराम येचुरीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” लाई कम्युनिस्ट गठबन्धनको विजयका लागि बधाई दिएका छन् । बधाई सन्देशको पूर्ण पाठ निम्नानुसार छ । क. पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) काठमाडौँ । प्रिय कमरेड, भर्खरै सम्पन्न सङ्घीय संसद र
एका बिहानै झापामा टिप्पर र यात्रुबाहक बस ठोक्कियो ! १२ जना घाइते …
यात्रुबाहक बस र टिपर ठोक्कियो, १२ घाइते टीकाराम नेति झापा – बाक्लो हुस्सुका कारण झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाको चारपाने चोकमा बिहीबार विहान सबेरै यात्रुबाहक बस र टिपर आपसमा ठक्कर खाँदा १२ जना घाइते भएका छन् । जसमध्ये दुईको अवस्था गम्भीर छ । घाइतेको बीएन्डसी र बिर्ता सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । पूर्वबाट पश्चिम
अस्थायी राजधानी नतोके पछी ८ औँ प्रदेश घोषणा गर्ने चेतावनी …
काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम बुटवल घोषणा गरेपछि दाङमा आन्दोलन चर्किएको छ। सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध बुधबार दाङको घोराही, तुलसीपुर, लमहीलगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन भयो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। उनीहरूले सरकारले माग सम्बोधन नगरे आठौँ प्रदेश घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। धनगढीलाई अस्थायी
तिन तला माथिबाट खसेर एक कामदारको मृत्यू ! …
३ तला माथिबाट खसेका मजदुरको मृत्यु !! जाजरकोट, माघ ३ – जाजरकोटमा निर्माण भइरहेको भवनबाट लडेर एक जनाको ज्यान गएको छ । बर्दिया सानोश्री नगरपालिका– ६ घर भएका बलबहादुर विकको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ मा बन्दै गरेको भवनबाट लडेका थिए । घरको ढलान सेटिङ गर्ने क्रममा विक तीन तला माथिबाट खसेका थिए । घाइते
१‍‍.५ लाख जनाले ट्राइल पास गरेर पनि किन लाइसेन्स पाएनन् ?
ट्रायल पास गर्ने अढाई लाखले किन पाएनन् आइसेन्स ? काठमाण्डु, ४ माघ– सरकारको अकर्मन्यताका कारण सवारी चालक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेका अढाई लाख नेपालीले चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पाउन सकेका छैनन्। लाइसेन्स नपाउनेको संख्या २ लाख ५० हजारभन्दा धेरै पुगेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। नियामक निकायले समयमा नै निर्णय नगर्दा सेवाग्राहीले
३१ जोडी श्रीमान-श्रीमती देखी आफन्त, नातागोताले खान्छन सिटीईभिटीमा जागिर
admin January 18, 2018 देश 0
काठमाडौं ४ माघ । सानोठिमीस्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) भित्र जागिर खाने/खुवाउने पारिवारिक जालोका केही प्रतिनिधि पात्र हुन् उनीहरू । सीटीईभीटीका तीन कर्मचारी संगठनका अध्यक्षका आफन्त हुन् यिनीहरू । अध्यक्षहरू मात्रै किन ? पहुँचवाला कर्मचारी, निर्देशक र पूर्वसदस्यसचिवका आफन्तसमेत धेरैले ठूलो संख्यामा नातागोतालाई जागिर खुवाएका छन् । प्राविधिक शक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्
जटिल बन्दै अलैंची खेती
Sudur Khabar desk January 18, 2018 देश 0
इलाम माघ ४ – नेपालमा वार्षिक साढे चार अर्ब रुयैयाँ भित्र्याइरहेको नगदेबाली अलैंचीसम्बन्धी बेग्लै नीति बन्न नसक्दा किसान र व्यवसायीले झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड कार्यान्वयन र तेस्रो मुलुक निर्यातसम्बन्धी सम्झौता अभावले अलैंची उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मै समस्या झेल्नुपरिरहेको किसान र व्यवसायी बताउँछन् । नागरिकमा समाचार छ । पूर्वी पहाडी जिल्लाकोमुख्य नगदेबाली